Ukusetyenziswa gwenxa kwesanti kuvelisa iimpembelelo zokusingqongileyo nezopolitiko | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukusetyenziswa gwenxa kwemithombo yendalo kudala iimpembelelo ezininzi kokusingqongileyo nakoorhulumente abalawula ezi zibonelelo kunye nommandla. Kule meko, sithetha ngayo ukuxhaphaza kakhulu isanti.
Isanti sisixhobo esiya sisiba silinganiselweyo kwaye sixabisekile, kuba sinqabile ngenxa yamaqondo aphezulu okhukuliseko olubangelwa yintlango ebangelwa ngabantu. Oku kuxhaphaza kakhulu kuvelisa, Ukongeza kwiimpembelelo kokusingqongileyo, kwezoqoqosho, kwezopolitiko nakwezentlalo. Oku kunyanzela amanyathelo afanelekileyo ukuba amkelwe kulawulo oluzinzileyo olulawula ukusetyenziswa kwalo.
1 Ukubaluleka kwesanti njengesixhobo
2 Ukuxhaphaza kakhulu isanti
3 Amanyathelo okulwa le meko
Ukubaluleka kwesanti njengesixhobo
Isanti evela kumanxweme, imilambo kunye nolwandle idlala indima ebalulekileyo kwindalo ngenxa inani elikhulu leentlobo ezihlala kulo kunye nokukhuselwa okukuyo kunxweme lwezinto ezinzulu zemozulu, ngokwenqaku elikwiphephancwadi leSayensi.
Abantu bebesakha kwaye beguqula zonke iindawo zendalo ukuya kwiindawo ezisezidolophini kwaye benze izixeko zokuhlala kunye nokuphuhlisa inkqubo yezoqoqosho. Olu phuhliso lolwandiso lweedolophu kumhlaba wonke luye lwasebenza Uxinzelelo olunamandla kwimfuno yesanti ngokuba sisixhobo esiyimfuneko nesingundoqo kwishishini lokwakha. Isanti isetyenziselwa ukwenza izinto ezifana nekhonkrithi, i-asphalt okanye iglasi.
Ukongeza, isanti ikwasetyenziswa ekubuyiseleni unxweme okanye ukuqhekeka kwe-hydraulic, ebangela ukuba ibango layo likhule ngokukhawuleza njengeengxaki ezinxulumene nokusetyenziswa kwalo.
Ukuxhaphaza kakhulu isanti
Oku kusetyenziswa kakhulu kuchaphazela i-ecosystems yendalo ngendlela engeyiyo, ukusukela iyantlukwano yeebhedi zemilambo kunye neendawo eziselunxwemeni zonakalisiwe. Ukuba i-ecosystem apho izilwanyana kunye nezityalo zihlala khona zichaphazeleka kakubi, ikwachaphazela ne-trophic chain, isaphula ibhalansi yendalo. Ukongeza, intsilelo yesanti ineziphumo ezibi kwimveliso nasekufumaneni ukutya koluntu lwasekhaya.
Umsebenzi owenzeka phantse kuzo zonke izixeko eziselunxwemeni kukuhambisa isanti ukusuka kolunye ulwandle ukuya kwelinye ukuzalisa. Ukwakhiwa komntu elunxwemeni, njengemivalo yaselwandle, amazibuko, amazibuko, njl. Batshintsha amandla esanti kwaye baphazamise ukuhamba rhoqo, babangele ukusilela kwezinye iindawo zamanxweme. Ukuthomalalisa le ngxaki, isanti ithathwa kulwandle olunabantu abaninzi ize ithululwe kuleyo inentsilelo.
Nangona kunjalo, lo msebenzi unokuququzelela ukusasazeka kweentlobo ezithile ezingenayo abo babona ithuba labo apho, okanye abakhokelela ekwakheni amanzi amileyo athanda ukusasazeka kwezifo ezosulelayo ezinjengemalariya.
Enye yezona ngxaki zinkulu zibangelwa kukusetyenziswa ngokugqithileyo kwesanti kukuba kunciphisa inani lentlenga elifunyenwe elunxwemeni nakwiilwandle. Ukuba i-delta ayinaso isixa esikhulu sentlenga, ayizukuzikhusela kwiziphumo zamanxweme kunye nokutshintsha kwemozulu njengokunyuka kolwandle okanye ukuqiniswa kwezaqhwithi, ezo monakalo, zona, zonyusa ibango lesanti.
Amanyathelo okulwa le meko
Umphandi walo mba, Aurora Torres umfanekiso wokubamba, ibonisa ukuba amanyathelo makathathwe ukunqanda le meko ikhoyo yokuxhaphaza kakhulu kwesi sixhobo silinganiselweyo nesinexabiso.
“Kubalulekile ukuba oorhulumente basebenzisane apha ekhaya nakumanye amazwe kulawulo lwabo. Oososayensi abavela kumacandelo ahlukeneyo kufuneka basebenze ngokwembono yenkqubo ukuze abenzi bomgaqo-nkqubo kunye noluntu bazi ubungakanani bale ngxaki kunye neempembelelo zayo”Utshilo uTorres.
Okokugqibela, ugxininisa ukuba kunyanzelekile khuthaza ukurisayikilishwa kwezinto zokwakha nokudiliza, kuba bavelisa izigidi zeetoni ngonyaka kwaye banokugcina iindleko ukuba ziphinde zenziwe ntsha, ukongeza ekungangeni kumhlaba wokulahla inkunkuma. Izibonelelo zokukhutshwa kwesanti kungakhokelela ekuveleni kweengxabano zezopolitiko nezentlalo, ngamanye amaxesha ezinobundlobongela, ezinje ngokuvela kwesafa mafia okanye uxinzelelo phakathi kwamazwe angabamelwane ngenxa yokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kunye nokukhutshwa ngokungekho mthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa ngokugqithileyo kwisanti kuvelisa iimpembelelo zokusingqongileyo nezopolitiko